Author Topic: ကိုကိုထွန်းအေးတင်တဲ့ဟာသများ (Read 247998 times)
« Reply #470 on: August 11, 2011, 10:32:21 AM »
" မျက် စိ စုံ မှိတ် ကာ ကွယ် ခြင်း "
မိန်းမကို ထိုးကြိတ်ရိုက်နှက်မှုဖြင့် ယောင်္ကျားတစ်ဦးကို ရုံးတင်သည် ။ ၄င်း ၏ ဇနီးသည်မှာလည်း
သက်သေအဖြစ် ရုံးသို့ ရောက်လာသည် ။ ယောင်္ကျားကို လက်ထိပ်နှင့် မြင်ရသောအခါ မိန်းမဖြစ်သူ
ရင်ထဲ စို့ သွားသည် ။ ယောင်္ကျား အပြစ်မကျရအောင် တတ်နိုင်သမျှ ကာကွယ်မည် ဟု ဆုံးဖြတ်
လိုက်သည် ။ တရားသူကြီးက ၄င်းကို မေးသည် ။
" ခင်ဗျား ရဲ့ညာဘက်မျက်လုံး အောက်မှာ ရောင်ကိုင်းနေတာဟာ ဒီလူ ထိုးကြိတ်လို့မဟုတ်လား "
" မဟုတ်ပါဘူး ရှင်....၊ အမှောင်ထဲမှာ တံခါးနဲ့ကျမဟာ ကျမ ဆောင့်မိတာပါ.. "
" ခင်ဗျား နားရွက်တစ်ဖက် ပဲ့နေတာကရော သူ ကိုက်လို့မဟုတ်ဘူးလား.. "
" မဟုတ်ရပါဘူးတော်.. ကျမဟာ ကျမ ကိုက်လိုက်တာပါ.. "
« Reply #471 on: August 11, 2011, 10:47:01 AM »
" သက် ပြင်း ချ တာ ချင်း အ တူ တူ "
တရားသူကြီးက သက်သေ အမျိုးသမီးကို အရင် မေးသည် ။
" ခင်ဗျား မှာ အိမ်ထောင် ရှိသလား.. "
အမျိုးသမီးက သက်ပြင်း ချသည် ။
" အိမ်ထောင် မရှိဘူး လို့ရေးလိုက် " ဟု တရားသူကြီးက ရုံးစာရေးကို ပြောသည် ။
ထို့ နောက် အမျိုးသား သက်သေကို မေးသည် ။
" ခင်ဗျားဆီမှာ မိန်းမ ရှိသလား.. "
အမျိုးသား သက်သေ သက်ပြင်းကြီး ချသည် ။
" အိမ်ထောင် ရှိတယ်လို့ရေးလိုက် " ဟု တရားသူကြီးက ရုံးစာရေးကို ပြောသည် ။
" မု ဆိုး မ ယော င်္ကျား "
" တရားခံကို ခင်ဗျား သိတယ်နော် "
" ဟုတ်ကဲ့..သိပါတယ်.. "
" ခင်ဗျားရဲ့အဆိုအရ သူဟာ မုဆိုးဖို နော် "
" မုဆိုးဖို ဆိုတာ ဘယ်လို လူလဲ ဆိုတာလည်း သိတယ်နော်.. "
" သိပါတယ်... မုဆိုးမရဲ့ယောင်္ကျားပါ "
« Reply #472 on: August 11, 2011, 10:54:29 AM »
" အ ထိတ် တ လန့်"
ညီအစ်မ သုံးယောက် ဆုံကြပြီး သည်းထိတ်ရင်ဖို အဖြစ်ရဆုံး ကိစ္စကို ပြန်ပြော
နေကြသည် ။ အစ်မအကြီးဆုံးက စပြောသည် ။
" ပထမဆုံး ကလေးကို မွေးတုန်းက သည်းထိတ်ရင်ဖို အဖြစ်ဆုံးပဲ.. "
" ကျမကတော့ လက်ထပ်တဲ့ ညက ရင်တစ်ထိတ်ထိတ် အဖြစ်ဆုံးပဲ... " ဟု အလတ်
မက ပြောသည် ။ အငယ်ဆုံး အပျိုဖြန်းက မိမိ၏ အတွေ့ အကြုံကို ပြောသည် ။
" အရက်မူးနေတဲ့ အစေခံမ က ကျမကို ၀မ်းချူတုန်းက အချောက်ချားဆုံးပဲ "
« Reply #473 on: August 11, 2011, 11:02:53 AM »
" ကိုယ် တိုင် ခံ စား ကြည့် ပါ "
ဆယ်နှစ်သားအရွယ် ချာတိတ်တစ်ယောက် ဆေးတံသောက်နေသည်ကို ဖြတ်သွားသော
လူကြီးတစ်ယောက်က မြင်သဖြင့် ချာတိတ်ရှေ့ တွင် ရပ်လိုက်ပြီး ပြောသည် ။
" ဟေ့ ချာတိတ်.. မင်းက ငယ်လေးလေးနဲ့ဆေးတံ သောက်နေပါလား.၊ ဆေးလိပ် .ဆေး
တံ သောက်ရင် အဆုတ်ကို ထိခိုက်စေတယ်ကွယ့်.. "
ချာတိတ်က ဆေးတံကို ထပ်ရှိုက်လိုက်ပြီး ပြန်ပြောသည် ။
" အန်ကယ်လ် ပြောတာ မှန်ပါတယ်...ဒါပေမဲ့ အရက်သောက်ပြီးရင် ဆေးတံ သောက်ရတာ
အင်မတန် အရသာ ရှိတာကိုး..ခင်ဗျ.. "
« Reply #474 on: August 11, 2011, 02:37:55 PM »
" စမ်း ကြည့် ပါ ဦး "
" ဟင့်အင်း..ဟင့်အင်း.. ကျမ အိမ်ထောင်ပြုတဲ့ကိစ္စကို ထပ်မစဉ်းစား ချင်တော့ဘူး..
ယောင်္ကျား သုံးယောက်ကို ကျမ မြေမြုတ် သင်္ဂြိုလ်ပြီးပြီ..တော်ပြီရှင် . မုဆိုးမဘ၀
နဲ့ ပဲ နေတော့မယ်.. "
" ကျနော်နဲ့ဒီတစ်ခါ စမ်းကြည့်ပါဦး.. စတုတ္ထအကြိမ်မှာ ပြောင်းပြန် ဖြစ်ချင် ဖြစ်မှာပေ့ါ "
" တူ တာ မှ မ ဟုတ် တာ "
ယောင်္ကျားရှေ့ တွင် ဟင်းချိုပန်းကန်ကို မိန်းမ လာချသည် ။ ဟင်းချိုမှာ အမြင်အရပင်
စားချင်စရာ မရှိချေ ။ ဤအထဲ အနံ့ ဆိုးက ထွက်နေသေးသည် ။ ယောင်္ကျားဖြစ်သူ
သည် အိမ်က ခွေးကို ကြည့်လိုက်သည် ။ ၄င်း၏ ရှေ့ တွင်လည်း ယင်း ဟင်းချိုကိုပင်
ချထားသည်ကို တွေ့ ရသည် ။ ခွေးသည် လုံးဝ မစားပဲ နေသည် ။ အခြေအနေကို ရိပ်
မိသော မိန်းမက ယောင်္ကျားကို ပြောသည် ။
" ဒီ ဟင်းချိုကို ခွေးလည်း မကြိုက်ဘူးဆိုတာ ကျမ သိတယ်....၊ ဒါပေမဲ့ သူက ခွေး.
သူကို ဘယ်လိုမှ ချော့ကျွေးလို့မရဘူးရှင့်.. "
« Reply #475 on: August 11, 2011, 03:02:53 PM »
" အ ညံ့ ဆုံး ဆင် ခြေ "
လင်မယားချင်း စကားများကြသည် ။ ဒီမိန်းမနှင့် ဆက်ပေါင်းရန် မဖြစ်နိုင်တော့ ဟု
ယောင်္ကျားဖြစ်သူ ဆုံးဖြတ်လိုက်သည် ။ တရားဝင် ကွာရှင်းပြတ်စဲမည်.. ကနေ့ ပင်
အိမ်ပေါ်က ဆင်းတော့မည် ဟု ယောင်္ကျားက မိန်းမကို ပြောသည် ။ မိန်းမက ငို
ယိုပြီး တောင်းပန်သည် ။
" ရှင် တစ်ကယ် ရက်စက်တော့မှာလား ဟင်.. ကျမတို့အတူတကွ ပေါင်းသင်းခဲ့တဲ့
နှစ်တွေကို သတိရပါဦး.. "
" အဲ့ဒီနှစ်တွေ အတွင်းမှာပဲ မင်းကို ပိုပိုပြီး ငြီးငွေ့ လာတာပေါ့... ပေးတဲ့ ဆင်ခြေကိုက
« Reply #476 on: August 11, 2011, 03:17:04 PM »
" အ သက် ကြီး ချင် လိုက် တာ "
" ရောဘတ် ရေ.... အသက်ငယ်ငယ် ချောချော ကောင်မလေးတွေကို မြင်လိုက်တိုင်း
ငါ အသက် ၂၀ လောက် ကြီးချင်စိတ် ပေါ်လာတယ်.. "
" အသက် ၂၀ လောက် ငယ်ချင်တယ်လို့ပြောစမ်းပါကွာ.. "
" မဟုတ်ဘူး.. တကယ့်ကို အနှစ် ၂၀ လောက် ကြီးချင်တာကွ... အဲ့ဒီတော့မှ ပြစ်မှား
ချင်စိတ် မရှိမှာ.. "
" မ ရှိ ရင် ယူ ပေ့ါ "
မိမိတို့ နှင့် ပတ်သက်ပြီး ဟာသအမျိုးမျိုး ပြောသဖြင့် နောက်ဆုံး သည်းမခံနိုင်တော့၍
ရုရှားတို့ ကို ချူချာများက စစ်ကြေညာသည် ။ လွင်ပြင်တစ်ခုတွင် တင့်ကား နှစ်စီး
ထိပ်တိုက် ရင်ဆိုင်တွေ့ ကြသည် ။ တစ်စီးတွင် ရုရှား စစ်သားများ ရှိကြပြီး အခြားတစ်
စီးတွင် ချူချာတို့ရှိနေကြသည် ။ ထိပ်တိုက်ဖြစ်နေကြသော်လည်း မည်သူမှ စမပစ်ကြ
ချေ ။ ချူချာတစ်ယောက် တင့်ကားထဲမှ ခေါင်းပြူထွက်ကာ တစ်ဘက် တင့်ကားကို
" ဟေ့ ရုရှားတွေ ဘာဖြစ်လို့မပစ်တာလဲကွ. "
" တို့ ဆီမှာ ကျည် မရှိလို့"
" အဲ့ဒါဆို တို့ ဆီက ယူလေ.. "
« Reply #477 on: August 11, 2011, 03:29:30 PM »
" ရေ ချိန် "
ယောင်္ကျား နှစ်ယောက် အလုပ်လာလျှောက်သည် ။ အလုပ်ရုံပိုင်ရှင်က ပထမလူကို
" ခင်ဗျား အရက်သောက်တတ် သလား "
" သောက်တတ်ပါတယ်.. "
" ဘယ်လောက် သောက်နိုင်သလဲ "
" အခြေအနေ အရပါပဲ "
" ဆောရီးပဲ... ခင်ဗျားကို မခန့် နိုင်ပါဘူး.. "
ဒုတိယ လူကို ဆက်မေးသည် ။
" ခင်ဗျား အရက်သောက် သလား "
" သောက်ပါတယ်... "
" နှစ် လီတာပါ "
" ခင်ဗျားကို အလုပ် ခန့် တယ်.. "
ပထမလူက အလုပ်ရှင်ကို မကျေမနပ် ပြောသည် ။
" ဘယ်လိုလဲဗျာ.. ကျနော်က သာမန်လူတွေလို သောက်တယ်
သူက နှစ် လီတာ သောက်နိုင်တယ်.ဒါပေမဲ့ သူ့ ကို ခန့် တယ်.
" သူက သူ့ ရေချိန်ကို သိတယ်..၊ ခင်ဗျားက မသိဘူး.. "
« Reply #478 on: August 11, 2011, 03:40:03 PM »
" လူ နာ တင် ကား "
အရေးပေါ် လူနာတင်ကား ဆေးရုံရှေ့ သို့ဆိုက်လာသည် ။ ဆေးရုံပေါ်မှ ဆေးရုံဝန်ထမ်းများ
ပြေးဆင်းလာကြသည် ။ ၀န်ထမ်းတစ်ဦးက ကားထဲ ချောင်းကြည့်ပြီး နားမလည်သံဖြင့် လူနာ
တင်ကား ဒရိုင်ဘာကို ပြောသည် ။
" မင်း ဖုန်းဆက် ပြောတုန်းက ကားတိုက်ခံရတဲ့ လူနာတစ်ယောက်ကို တင်လာတယ်ဆို .အခု
လေးယောက်တောင် ဖြစ်နေပါလား.. "
ဒရိုင်ဘာက ဂုဏ်ယူဝင့်ကြွားသံဖြင့် ပြောသည် ။
" ကျန်တဲ့လူတွေက ဆေးရုံအပြန်လမ်းမှာ ကျနော် တိုက်ခဲ့တာပေါ့ဗျ.. "
" ဆံ ပင် အ တု "
" စိတ်မရှိပါနဲ့ ဗျာ.. ခင်ဗျား ဆံပင်အတု စွပ်ထားသလား "
" ဒုက္ခပါပဲတော်.. ဆိုင်မှာ ၀ယ်တုန်းက အစစ်နဲ့ အတု ဘယ်သူမှ မခွဲနိုင်ဘူး ဆိုလို့ဝယ်လိုက်မိတာ "
" တံဆိပ်ကို ဖြုတ်ထားရင် ကျနော်လည်း မသိပါဘူး.. "
« Reply #479 on: August 12, 2011, 09:48:39 AM »
" အ ရင် လို မ ဟုတ် တော့ ဘူး "
မေရီ က သူ့ ယောင်္ကျားကို ပြောသည် ။
" လက်မထပ်ခင်တုန်းက ဘယ်သွားသွား ရှင် ကျမအတွက် တက္ကစီ ငှားပေးတယ်..
အခုတော့ ဘတ်စ်ကားနဲ့သွားရင်ဖြစ်တယ်လို့ရှင် ယူဆလာပြီပေါ့လေ..ဟုတ်လား "
" မင်းကလဲကွာ မဟုတ်ရပါဘူး...၊ မင်းအတွက် ငါ ဂုဏ်ယူချင်လို့ဘတ်စ်ကားစီး
ခိုင်းတာပါ..။ တက္ကစီမှာဆိုရင် ဒရိုင်ဘာ တစ်ယောက်တည်း မင်းကို မြင်တယ်....အဲ
ဘတ်စ်ကားမှာကျတော့ လူပေါင်း မြောက်မြားစွာက မင်းရဲ့အလှကို ကြည့်နိုင်ကြ